Miverina Ao Timor Atsinanana Ny Herisetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2018 17:18 GMT
Nipoaka tao Timor Atsinanana indray ny herisetra raha toa ka niezaka ny hisambotra ilay mpitarika mpikomy, Alfredo Reinado, ny mpitandro filaminana iraisam-pirenena. Voarohirohy tanatin'ilay herisetra niseho tamin'ny volana Mey farany teo i Reinado, ilay lehiben'ny tafika teo aloha ary notanana am-ponja kanefa tafatsoakan'ny fonja tamin'ny volana Aogositra, niaraka tamin'ireo mpanaraka azy sasantsasany. Tany amin'ny faritra an-tendrombohitra no nitranga ny ady (tao atsimon'i Dili, renivohitr'i Timor Atsinanana), izay nampiasain'ireto mpikomy ho toy ny tobiny. Nahozongozon'ny herisetra ihany koa i Dili rehefa nifanandrina tamin'ireo mpitandro filaminana iraisam-pirenena ireo mpanohana ilay mpitarika mpikomy omaly alina.
Manoratra mikasika ilay fiverenan'ny herisetra farany teo (pejy voafafa) tao Timor Atsinanana i Tumbleweed any Azia, mponina tao Timor Atsinanana nandritra ny fotoana naharitra izay ivelan'ny firenena ankehitriny.
Ny fahitàna an'i Timor misosa indray anaty korontana dia toy ny mijery potikà ‘Tofu’ kely misosa tsimoramora ambony toerana mitongilana, midina tsikelikely, ampiadanin'ny hamandoany, ary tampoka teo, omaly alina, nitombo hafainganana tampoka ity potikà ‘Tofu’ ity ka nidona mafy tamin'ny tany, nipasapasaka ho potipoti-dronono mitambongana aman-tapitrisany kely be dia be tsy misy ilàna azy.
Manoratra mikasika ny zavatra niainany i Dili-gence,, mponina iray ao Dili
Teo amin'ny 3:45 teo, nifoha aho … tena reraka be … avy eo naheno ireo feonà poa-basy. Naheno teo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 teo aho nandritra ny antsasan-kadiny, avy eo nangina mandra-pitifitr'ireo angidimby.
Tamin'ny maraina teo, nisy fifanakalozam-baovao mavitrika tamin'ny alàlan'ny finday satria maro ireo mpila ravinahitra naheno poa-basy ary azo antoka fa nampihorohoro ireo mponina tao an-toerana izany. Nafana be angamba ireo taribin'ny finday satria maro ireo mpila ravinahitra niezaka ny hahafantatra ny zava-nitranga.
Namahana ny herisetra ny honohono sy ny tsy fahazoana antoka taloha. Sahiran-tsaina amin'ireo olona fantany ao Timor Atsinana i Tumbleweed
Tanàna haolo hono i Dili araka ny henoko… miafina avokoa ny rehetra ary mazava ho azy, tsy maintsy miasa amin'ny ora fanampiny ny làlan'ny tsaho noho ny hakelezan'ny fahafahana mahazo vaovao tsara. Milaza ny OZ media fa 4 no maty kanefa iza no mahalala. ny haiko fotsiny dia ny hoe sarotra be ny mipetraka ato amin'ny efitranoko anatin'ity tontolo manan-karena ity kanefa ireo namako any Timor.
Efa voamarin'ny tafika Aostraliana taorian'izay fa olona efatra no maty tao anatin'ireo fifanandrinana niarahana tamin'ireo mpikomy. Manana vaovao fanampiny sy torohevitra ho an'ireo mponina hafa ao Dili i Dili-gence.
Fotoana tsara andehanana manangona sakafo izao raha toa ka mahazo mivoaka ianareo. Mety ho tsy azo antoka ireo andro vitsivitsy ho avy eo.